Tafakatra 9 ny maty, 5 naratra mafy…: nisotro toaka “nanala lolo”, mamo ilay mpamily | NewsMada
Par Taratra sur 14/04/2021
“Fahamamoana eo am-pamiliana” (conduite en état d’ivresse). Izay, araka ny fanadihadiana nataon’ny manampahefana nizaha ny zava-nitranga teny an-toerana no fototr’ilay lozam-pifamoivizana nahatsiravina, namoizana ain’olona sivy, nitranga teny amin’ny lalana By-Pass, afakomaly alina. Hoe “nanala lolo” ilay mpamily.
Tranga tsy nampoizina. Fahoriana misesisesy no iainan’ny fianakavian-dramatoa Stella tao anatin’ny andro vitsy. Vao avy nanotrona ny fianakaviany nidom-pahoriana izy ireo izao semban-drahona mainty izao indray. “Tsy nampoizina ilay izy ary tsy mora ihany koa ny miatrika izao fahoriana izao, saingy tsy maintsy zakaina”, hoy ramatoa Stella, ao anatin’ny alahelo tanteraka. Ho azy manokana, zaobaviny roa vavy indray namoy ny ainy tao anatin’iny lozam-pifamoivoizana nahery vaika tetsy By pass iny, ny alin’ny alatsinainy teo tokony ho tamin’ny 08 ora.
Nohazavainy tamin’ny antso an-telefonina fa isan’ny atahorana mafy ny ain’ilay zokiolona, fianakaviany, ankehitriny noho izy voadona mafy teo amin’ny lohany. “Toa ireny zavatra kely ireny sisa no mitazona ny lohany”, hoy hatrany ny fanazavany. Mbola ny fianakaviana iray manontolo no miantoka ny fitsaboana ireo sisa velona nefa ny vola eo am-pelatanana tsy maharaka.
Tara ny famoahana ny razana
Araka ny nambaran’ny fianakaviana, omaly hariva vao nivoaka ireo nofo-mangatsiaka miisa 9, izay mbola samy natao “autopsie” avokoa. Voalaza fa mbola niandry ireo zandary avy etsy Ambohimangakely vao nahazo navoaka ireo razana.
Ankehitriny, ao anatin’ny fandaminana ny fandaharam-potoana ireo fianakaviana nidom-pahoriana. Raha ny fantatra, misy amin’ny ireo razana no halevina rahampitso any Ambohitrandriamanitra, toerana izay vao avy nandevenan’ireo fianakaviana ihany. Raha ny zoma izao kosa ny fandaharam-potoana amin’ny fandevenana ireo tra-doza hafa, izay hatao etsy Ambohimanambola.
Voasambotra ilay mpanampy ny mpamily…
Tra-tehaky ny zandary teny Ambohimangakely ilay mpanampy ny mpamily nitsoaka taorian’ny loza. Anatin’ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro filaminana. Ary voatazon’ny zandary ao an-toerana ireo roa lahy. Tsy marina, hoy ny zandary ao an-toerana, ny filazana fa tapa-tongotra ilay mpamily. “Tsy nahatsiaro tena fotsiny izy taorian’ny loza ary nentina teny amin’ny hopitaly. Taorian’izay, navoakan’ny dokotera izy ary tazomina ato aminay”, hoy ny zandary.
Tsiahivina fa tra-doza teo By pass ny fiara nitondra ireo fianakaviana avy nandevina tany Beravina raha hitodi-doha hamonjy ny renivohitra. Araka ny nambaran’ny loharanom-baovao, efa mamo ny mpamily sy ny mpanampy taorian’ny fandevenana. Ao koa ireo nilaza fa mbola nisotro toaka teo Anjeva izy ireo mba “hanalana lolo” ka isan’ny nitarika izany ny zanaky ny maty sy ny mpamily. Nambaran’ny loharanom-baovao iray hafa koa fa rehefa tafiditra teo By Pass ka nandre izy ireo fa voan’ny Covid-19 ny tompon’ny fiara dia nitoditodika naka finday tamin’ny mpandeha tao aoriana ny mpamily nefa sady nandeha mafy. Vokany, nivoaka ny arabe ny fiara ka nifatratra tao amin’ilay “plateau” vy mandrafitra ilay “remorque” izay tsy anaty lalana. Vetivety ihany dia tonga ny zandary nisintona sy namoaka ireo tra-doza. Nanampy izany koa ireo mponina teny amin’ny manodidina. Nambaran’izy ireo fa naharitra ora 3 mahery ny famoahana ireo tao anaty fiara.